Wafti Reer Denmark ah oo Booqday Kulliyada Tababarka Macalimiinta iyo maktabada Garoowe, lana kulmay madaxweynaha Puntland
Waxaa (sabtidii) booqday kuliyada tababarka macalimiinta iyo xarunta maktabada ee Garoowe wafdi ka socdo Denmark oo kala ahaa Saalax Siciid Diiriye iyo Allan Vokstrup.
Wafdigu wuxuu u kuurgalay heerka waxbarasho ee puntland guud ahaan iyo magaalada Garoowe gaar ahaan. Waxaa heerarkii kala duwanaa ee waxbarashada Garoowe soo martay wafdi warbixin faahfaahsan ka siiyay mudane Abdirisaq Ahmed Sh. Shoole madaxa kuliyada tababarka macalimiinta ee Garoowe. Mudane Abdirisaaq waxaa wafdiga ku wargaliyay ineey baahida asaasida kuliyaad ka danbeysay kadib markii lo ogaaday in wixii burburkii dowladii dhexe ee soomaaliya kadib aan wax macalin ah qalin jabin sidaa daraadeedna baahi weyn loo qabay hirgalinta xaruntaa. Ugu danbeytii waxaa wafdigu indha indheeyay qeybaha kala duwan ee kuliyada. Isla maanta wafdigu wuxuu sidoo kale booqday maktabada weyn ee magaalada Garoowe.
Waxaa halkaa wafdiga kusoo dhaweeyay masuuliinta maktabada oo si faahfaahsan ugu waramay wafdiga. Maktabada Garoowe ayaa wax kusoo kordhisay bilicda magaalada sidoo kale waxeey xarun u noqotay dhalinta magaalada ee doonayo ineey daalacdaan culuunta kala duwan. Waxa kale oo ay booqdeen kuliyada GAROWE TEACHER EDUCATION CENTER.
Waxaa wafdigu maalinta Axadii la kulmeen madaxweynaha Puntland Dr. Abdirahman Maxamed Maxamuud Faroole..
M.WEYNAHA PUNTLAND OO LA KULMAY 2 HEYADOOD OO DEENISH AH
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiraxmaan Maxmed Faroole ayaa maanta xarunta madaxtooyada ee Garoowe ku qaabilay wafdi ka socdo 2 heyadood oo deenish ah. Wafdigu wuxuu ka koobnaa Mudane: Saalax Siciid Diiriye iyo Mudane: Allan Vokstrup oo kala matala Puntland Aid Service (PAS) iyo Danish People Aid (DPA). Mudane Saalax oo ku hadlayay magaca ururku uu madaxda ka yahay iyo midka jaaliyada reer Puntland ayaa madaxweynaha wuxuu xogwaran waafi ah kasiiyay xaalada jaaliyada Soomaaliyeed si guud ahaan iyo mida reer Puntland si gaar ahaaneed. Saalax waxaa u madaxweynaha u gudbiyay salaan iyo bogaadin uu ka sido jaaliyada soomaaliyeed ee ku dhaqan Denmark.
Kulankaa waxaa la isla meel dhigay in la kor loo qaado isla markaana la joogteeyo xiriir maamulka Puntland iyo jaaliyada reer Puntland ee qurbaha kunool. Madaxweynuhu wuxuu xusay doorka qurba joogtu ka ciyaari karaa dib u dajinta, dib u dhiska iyo waliba hormarka dalka hooyo, wuxuu kaloo ku bogaadiyo in jaaliyada dibada dadaal dheer ah sameeyaan isla markaana si karti leh isku muujiyaan.Mudane Allan ayaa madaxweynaha wuxuu sharaxaad dheeraad ah ka siiyay ujeedada socdaalka iyo mashaariicda heyaduusu qabato, iyo waliba sida eey ugu dhiiran yihiin in wixii hada ka danbeeyo Puntland xafiis ka furan doonaan. wada shaqeyn wanaagsan iminka la leeyihiin heyadaha wadaniga sida KAALO. Mudane Saalax ayaa madaxweynaha gudoonsiiyay hadiyad taasoo aheyd calanka soomaaliya oo lagu xardhay map-kii
Wafdiga ayaa madaxweynaha u muujiyay taageerada ee u hayaan dadaalka Dr. Faroole ugu jiro dhisid dowlad u dhan yihiin dhamaan waaxyaheeda isla markaana u heelan u adeegida shacabka doortay si dimoqoraadi ah. Kulankaa waxaa wafdiga ku weheliyay Dr. Abdi Hassan Jimcaale Wasiirka dimoqoraadiyada iyo arimaha federaalka iyo madaxa heyada wadaniga ee kaalo mudane Maxamuud Sh. Haamud. Labada masuulba waxeey wafdigu xog waran ka siiyeen marxaladihii Puntland soo martay si guud iyo hanaanka isbadal doonka ah ee dhawaan Puntland ka curtay. Wafdiga ayaa ugu danbeytii madaxweynaha u jeediyay codsi ah in madaxweynaha socdaal ku yimaado Denmark iyo qaarada yurub. madaxweynuhuna waa ogalaaday in socdaalka ku yimaado dhawaan qaarada Yurub.